Ogaden News Agency (ONA) – Heshiiskii Xabad-Joojinta ee Dalka Yemen oo Burburey.
Heshiiskii Xabad-Joojinta ee Dalka Yemen oo Burburey.
Posted by Dayr	/ December 19, 2018
Heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay kala saxiixdeen dhinacyada ku dagaallamaya dalka Yemen ayaa burburay daqiiqado un ka hor inta aanan la gaadhin wakhtigii kama dambaysta aheyd ee laga filayay inay dhaqangeliyaan, sida ay sheegeen saraakiil taabacsan dowladda.
Dhinacyada ku dagaallamaya Yemen ayaa ku heshiiyay inay joojinayaan dagaallada ka socda magaalada dekedda leh ee Xuddeydah. Xilliga kama dambeysta ah ee la dhaqan gelinayay heshiiska ayaa ku ekaa saqda dhexe ee wakhtiga dalkaasi. Balse waxaa lagu soo warramaya in magaalada Xuddeydah ay dib uga qarxeen dagaallo u dhexeeya fallaagada Xuuthiyiinta iyo ciidammo taabacsan dowladda.
Waxaa sidoo kale la sheegay in kooxda Xuuthiyiinta ay gantaallo ku rideen bariga dekedda Xuddeydah. Mid kamid ah dagaalyahanka dowladda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP inay weli dagaalladu taagaan yihiin.
Dhincayada Yemen waxay dalka Sweden ku kala saxiixdeen heshiis ay Qaramada Midoobey dhex dhexaadineysay oo la isku afgartay in xabadda la joojiyo. Waxaana loo arkayay heshiiskan inuu soo celin doono rajadii nabadda ku dhawaad muddo afar sanno ay dagaallo sokeeye ka taagnaayeen waddanka Yemen.
Xuddeydah ayaa 140 Kilomitar u jirta galbeedka magaalada caasimadda ah ee Sanca, waana magaalada afaraad ee ugu weyn dalkaasi. Waxay ahaan jirtay isha dhaqaale dalkaasi ka hor inta aysan qabsanin fallaagada dabayaaqadii sannadkii 2014-kii. Tan iyo bishii June waxaa Xuddeydaha duqeymo ka waday diyaaradaha dagaalka uu Sucuudiga horkacayo.